Tsvaga maitiro ekushongedza imba yekutandarira nemiti | Bezzia
Susana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Zvishongedzo zvekumba, Decoration
Zvirimwa hazvisi chete zvipenyu zvinotibatsira kugadzira nzvimbo ine hutano uye yakakosha nzvimbo, asi zvakare chikamu chekushongedza. In mazhinji emakamuri mumba tinokwanisa kuisa zvirimwa, kunyanya kana tisina terra kana bindu rekuve nazvo. Iri izano rakanaka kuwedzera rumwe ruvara nezvirimwa kuti imba yekutandarira igamuchire zvakanyanya.
ari zvirimwa zvinoshongedza munzvimbo yekutandarira vanogona kuiswa munzvimbo zhinji. Izvo zvakakosha kuti uzive kwekuzviisa kuitira kuti zvisavhiringidze uye kuti zvive zvinoshongedza. Kana iwe uchizowedzera mimwe michero mumba mako, usazeze kuisa imwe mumba mako yekutandarira kuitira kuti nzvimbo yacho igadzikane uye yakanaka panguva imwechete.
1 Maitiro ekuchengeta michero mumba yekutandarira
2 Wedzera cactus mumba yekutandarira
3 Gadzira kona kona
4 Zvirimwa mumabhasikiti akajeka
5 Kusungirira michero mumba yekutandarira
Maitiro ekuchengeta michero mumba yekutandarira
La nzvimbo yekutandarira inzvimbo yakajairika uko kunoshandiswa maawa akawanda. Ndokusaka zviri zvekugadzira nzvimbo inotonhorera kuti ugare wakasununguka. Zvirimwa zvinotibatsira kusimudzira kudziya mune chero nzvimbo. Kuti tivabate tinofanira kuziva mhando yemuti wacho uye nekuchengetwa kwaunoda. Sezvo tichifanira kuvachekerera, tinofanira kuvadiridza zvakadii kana kana vachida mwenje wakananga kana kwete. Izvo zvakakoshawo kuti isu tingosarudza zvirimwa zvemukati, zvikasadaro ivo havazokwanise kugara mukati meimba.
Wedzera cactus mumba yekutandarira
ari cacti munzvimbo yekutandarira izano rakanaka, kunyange hazvo iri hombe, inofanirwa kutarisirwa kuitira kuti mhuka kana vana vasakuvadzwe nazvo. Aya cacti akakwana kune ese marudzi enharaunda. Mumakamuri ekugara vanogadzira nzvimbo dzine hunhu hwakawanda. Iko kushongedza kweBhoho, iyo Nordic maitiro kana yeCalifornian dhizaini yakakwana kuti ishandise kushandiswa kweaya cacti, kunyanya kana ari makuru. Iyo cactus haidi kutarisirwa kwakanyanya, nekuti inofanirwa kunge iine mvura shoma uye haina kutemwa kana chero chinhu chakadai, saka kana isu tiri vatsva mukutarisira zvirimwa ndiyo pfungwa yakanakisa.
Gadzira kona kona
Kana iwe senge yakasarudzika maitiro nezvirimwa, zano rakakura nderekuwedzera kona ine zvirimwa. Shandisa mupfeki kana kunyange kabhuku kemabhuku kuisa zvirimwa pamatanho akasiyana. Unogona kuvawedzera munzvimbo ine mwenje wakanaka, padhuze nepahwindo. Makona ekudyara akakwana mune chero imba uye anotibvumidza kuti tiachengete zviri nyore. Unogona kushandisa fenicha yekare, nekuti ichave iine runako rwakawanda. Kana iwe ukaisa zvirimwa zvakati wandei mukona, unogona kuzvisanganisa, uchisarudza zvimwe zvakasiyana, kugadzira runyoro rwakanaka.
Zvirimwa mumabhasikiti akajeka
Wicker mabhasikiti ave akakurumbira zvakanyanya nekuti ndizvo zvakasikwa zvigadzirwa zvinowedzera zvinodziya kubata kumba. Ndokusaka pazviitiko zvakawanda ivo vachishandiswa kuvhara hari uye nekupa chaiyo kubata. Kana iwe uchizotenga zvirimwa zvihombe, unogona kushandisa iyi mhando yedengu kwenzvimbo yekutandarira. Mamwe ane pompu kana akapendwa, saka iwo akakwana ekushongedza padivi pemiti.
Kusungirira michero mumba yekutandarira
Imwe nzira yekuisa zvirimwa mu nzvimbo yekutandarira ine zvinomera zvakarembera. Kune zvidimbu zvekukochekera zvekuzvisungirira uye zvinotaridzika zvakanaka, kunyangwe zvichida rimwe basa nekuti unofanirwa kuisa hanger uye nekuisa hari, dzisingagone kuve dzakakura kwazvo. Rudzi rwehari dzinoshandiswa kupatsanura nzvimbo kana kushongedza madziro nedenga. Iri izano rakanaka rinotibatsira kushandisa zvirimwa munzvimbo zhinji mukamuri uye kuzvishongedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Maitiro ekushongedza imba yekutandarira nemiti